स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Ⅱ
समय: 2020-03-11 हिट्स: 83
के म उपचार को बीच कपाल हटाउन सक्छु?
यो एक उत्कृष्ट प्रश्न हो र उत्तर इलेक्ट्रोलीसिस को लागी हो उस्तै छ। तपाइँ पक्कै चिमटाउन वा मोम गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ चिमटाउनुहुन्छ वा उपचार को बीच मोम, तपाइँ शारीरिक रूप बाट लक्ष्य हटाउनुहुन्छ यसैले तीव्र स्पंदित प्रकाश को नष्ट गर्न को क्षमता कम (तपाइँ नष्ट गर्न सक्नुहुन्न कि त्यहाँ छैन)।
तपाइँ जे होस् उपचार को बीच दाढी गर्न सक्नुहुन्छ उद्देश्य को रूप मा मैट्रिक्स वा बल्ब र कपाल को शाफ्ट, जो दाह्री द्वारा अछूता छ संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी हो। आईपीएल उपचार को लागी क्लिनिक मा आउनु भन्दा पहिले आदर्श रूप मा ठुलो शरीर क्षेत्रहरु कपाल काट्नु पर्छ उपचार को समय मा कटौती गर्न को लागी, सतह कपाल उपचार भन्दा पहिले हटाउनु पर्छ।
मेरो कपाल अझै पनी बढ्दै छ?
यो तीव्र स्पंदित प्रकाश प्रणाली को नयाँ प्रयोगकर्ताहरु को लागी एक सामान्य टिप्पणी हो। पछि एक स्पंदित प्रकाश उपचार को व्यवस्थापन गर्न को लागी, शरीर कपाल बहाउन को लागी समय चाहिन्छ जो थर्मली नष्ट भयो। यो केहि मानिसहरु मा आठ देखि दस दिन लाग्न सक्छ र अरु लाई दुई देखि तीन हप्ता सम्म पुरा तरिकाले थर्मली क्षतिग्रस्त कपाल बहाउन सक्छ।
जे होस् यो जस्तो देखिन्छ कि कपाल बढ्न को लागी जारी छ, यो वास्तव मा शरीर कपाल पूरै बगाउने हो, र समय संगै उपचार कपाल छाला बाहिर बढ्नेछ। यो कपाल को निरन्तर बृद्धि को लागी गल्ती गर्नु हुँदैन।
के विशेष निर्देशनहरु को लागी पहिले र उपचार पछि छन्?
उपचार भन्दा पहिले:
उपचार साइट बाट सबै मेकअप र क्रीम हटाउनुहोस्।
आदर्श कपाल हटाउने को लागी उपचार क्षेत्र पूर्व दाढी।
उपचार को लागी कम्तीमा चार (4) हप्ता सूर्य बेड को उपयोग र 'नक्कली tanning' उत्पादनहरु बन्द गर्नुहोस्।
चार हप्ता पहिले / र उपचार को बीचमा घाम टेनिंग बाट बच्न र तपाइँको ट्यान फीका गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस् कि छाला वर्णक 'सामान्य' पहिलो उपचार भन्दा पहिले छ।
कपाल हटाउने उपचार भन्दा पहिले मोम वा चिमनी उपचार साइट नगर्नुहोस् (ठीक दाह्री)
उपचार (हरू) पछि:
उपचार को लागी सकेसम्म धेरै पछि तपाइँको सूर्य को जोखिम लाई सीमित गर्नुहोस्।
एक उच्च एसपीएफ़ कारक सनस्क्रिन प्रयोग गर्नुहोस् जब सूर्य को बीच / र उपचार पछि उजागर।
कूलिंग एलोवेरा जेल, चिसो compresses वा जमेको जेल प्याक संग उपचार पछि तातो रहन्छ जो कुनै पनि क्षेत्र कूल।
सूर्य बेड को उपयोग र 'नक्कली tanning' उत्पादनहरु बन्द गर्नुहोस्।
कपाल हटाउने उपचार को बीच मोम वा चिमनी उपचार साइट नगर्नुहोस्।
उपचार को लागी 12-24 घण्टा को लागी धेरै तातो स्नान, भँवर, सौना, वा भारी क्लोरीनयुक्त पौंडी पोखरी बाट बच्नुहोस्।
अंडरआर्मको कपाल घटाउने उपचार पछि बलियो दुर्गन्धबाट बच्न।
१२-२४ घण्टा को लागी उपचार को लागी जोरदार व्यायाम बाट बच्नुहोस्।
अघिल्लो: स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Ⅰ
अर्को: स्थायी लेजर आईपीएल कपाल हटाउने Ⅲ